33 Akyiri yi, Yakob maa n’ani so na ohui sɛ Esau ne mmarima ahanan reba.+ Enti ɔkyɛɛ mmofra no mu maa Lea ne Rahel ne mmaawa baanu no.+ 2 Ɔde mmaawa no ne wɔn mma dii anim,+ Lea ne ne mma dii so,+ na Rahel ne Yosef dii wɔn akyi.+ 3 Na ɔsen kodii kan na ɔbɔɔ ne mu ase mpɛn ason kosii sɛ oduu ne nua no nkyɛn.+ 4 Ɛnna Esau de mmirika behyiaa no,+ na ɔyɛɛ no atuu+ de ne ti too ne kɔn ho few n’ano, na wɔn baanu sui. 5 Bere a ɔmaa n’ani so huu mmea ne mmofra no, obisae sɛ: “Eyinom nso fi he?” Ɛnna obuae sɛ: “Ɛyɛ mmofra a Onyankopɔn de adom w’akoa.”+ 6 Na mmaawa no ne wɔn mma no baa wɔn anim, na wɔbɔɔ wɔn mu ase; 7 Lea ne ne mma nso bae bɛbɔɔ wɔn mu ase, na Yosef ne Rahel dii so bae, na wɔbɔɔ wɔn mu ase.+ 8 Afei obisae sɛ: “Na dɔm a mihyiaa wɔn yi nso kyerɛ dɛn?”+ Ɛnna ɔkae sɛ: “Meyɛɛ saa na manya me wura anim dom.”+ 9 Esau kae sɛ: “O me nua, eye; nea mewɔ dɔɔso.+ Ma wo nneɛma ntena wo nkyɛn.” 10 Nanso Yakob kae sɛ: “Dabi, mesrɛ wo. Sɛ manya w’anim dom a,+ ɛnde gye m’akyɛde yi, na w’anim a mahu yi te sɛ nea mahu Onyankopɔn anim, efisɛ woatew w’anim ama me.+ 11 Mesrɛ wo gye m’akyɛde yi, me nhyira a mede abrɛ wo yi,+ efisɛ Onyankopɔn adom me na manya biribiara.”+ Ɔkɔɔ so ara srɛɛ no, enti ogyei.+ 12 Afei ɔkae sɛ: “Ma yɛnkɔ, na medi w’anim.” 13 Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Me wura nim sɛ mmofra no ho nyɛ den na me nguan ne anantwi no bi ma nufu,+ na sɛ yɛka wɔn ntɛmntɛm da koro a, wɔn nyinaa bewuwu.+ 14 Enti mesrɛ wo, di w’akoa anim kan na mentɔ me bo ase nnantew sɛnea mmoa+ a wodi m’anim yi ne me mma no betumi,+ kosi sɛ medu me wura nkyɛn wɔ Seir.”+ 15 Ɛnna Esau kae sɛ: “Ɛnde ma memma wo nnipa a wɔka me ho yi bi na wɔmmoa wo.” Ɛnna ɔkae sɛ: “O adɛn? Nea mihia ara ne sɛ menya me wura anim dom.”+ 16 Enti saa da no Esau san n’akyi kɔɔ Seir. 17 Afei Yakob siim kɔɔ Sukot,+ na osii fie wɔ hɔ na ɔbɔɔ asese+ maa ne mmoa no. Enti na ɔfrɛɛ hɔ Sukot no. 18 Akyiri yi Yakob fii Padan-Aram+ beduu Sekem+ wɔ Kanaanfo+ asase so dwoodwoo; na osisii ntamadan wɔ kurow no anim. 19 Na ɔtɔɔ asase a osii ntamadan wɔ so no fii Sekem papa Hamor mma no nkyɛn, na ɔmaa wɔn nnwetɛbona ɔha.+ 20 Afei osii afɔremuka wɔ hɔ na ɔfrɛɛ no Onyankopɔn Israel Nyankopɔn.+